USB File Iweghachite - Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site USB Drive
> Resource> Flash Drive> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site USB Drive
N'ỤLỌ NCHE A:
Echefuola faịlụ site na a USB mbanye. Olee otú naghachi faịlụ site na a USB mbanye.
Echefuola faịlụ nwere ike ime n'ihi na nke ọ bụla n'ime n'okpuru ohere.
1. File e-ezighị ehichapụ si USB mbanye.
2. File ehichapụ ruru ka na-atụghị anya usoro.
3. File ehichapụ ruru na-ezighị ezi na ime ihe dị ka Anam Udeme ya ọhụma.
4. Nkebi Ọdịdị on a USB mbanye bụ ezughi ezu ma ọ bụ nkebi table bụ ghara ịdị irè.
5. Ọzọ omume ehichapụ faịlụ, na ndị ọzọ.
Usoro 1: Naghachi USB faịlụ site a ndabere
Method 2: Weghachi ehichapụ faịlụ na a USB mbanye si Recyle Bin / Mkpofu
Method 3: Naghachi faịlụ na a USB mbanye (free)
Usoro 1: Naghachi USB faịlụ site na a ndabere
Mgbe adịkwa faịlụ, ihe mbụ ị na mkpa ego bụ ma ị nwere ndabere na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa media. Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ọ dịghị inye gị nsogbu ọzọ. Dị nnọọ Gaa na nkwado ndabere na-esi na ya na gị na USB mbanye ọzọ.
Ya mere, na-eme a ndabere mgbe nile dị ezigbo mkpa na bara uru.
Method 2: Weghachi ehichapụ faịlụ na a USB mbanye si egweri biini / Mkpofu
Dị ka anyị maara, ọ dịghị egweri biini ma ọ bụ Mkpofu on a USB mbanye. N'ihi ya, mgbe ị na-ehichapụ a faịlụ kpọmkwem site USB mbanye, ọ bụ nnọọ na-arahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kpọmkwem ihichapụ faịlụ site na USB mbanye, ma dọkpụrụ ya ndị egweri biini ma ọ bụ Mkpofu na kọmputa gị. Mgbe ahụ ị pụrụ ozugbo weghachi ya n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị mere iji na-enweta egweri biini ka ahịhịa bupụrụ, ị ka nwere ohere iji agbake faịlụ site na egweri biini / ahịhịa, ma ị mkpa iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Dị na-agụ na. Ọ bụ usoro 3 n'okpuru.
1. Recuva (a Windows version)
2. PhotoRec (Windows na Mac nsụgharị)
3. Weghachi (Windows)
4. Wondershare Data Recovery (Windows na Mac nsụgharị)
Uru: Free, mfe na-eji undeleting; na-agụnye nọrọ ná nchebe-Nhichapụ atụmatụ. Portable version agba site USB mkpisi. Cons: Ọ bụghị dị ka ndị dị ike dị ka-zụọ uzo ozo; na-akọ faịlụ dị ka "unrecoverable" ndị ka na diski ike na otu ọnọdụ.
Recuva bụ a free na-na-na-download mmekọ na-naputa ehichapụ faịlụ site nta ka ọ bụla disk na Windows nwere ike na-agụ. Ọ pụtara na ọ na-ahapụ gị naghachi ehichapụ faịlụ site na gị USB mbanye, dị ka ogologo oge dị ka ọ pụrụ ịdị na-agụ gị na kọmputa. Recuva bụ effortless iji, na ihe mara mma interface na i nwere ike ịnyagharịa mfe.
Download ya ebe a: http://download.piriform.com/rcsetup149.exe"
Uru: Free software. Ntụziaka doro anya. Ọ dịghị n'ezie arụ ọrụ. Cons: Ọ dịghị preview. Na-arụ ọrụ-enweghị Ngwọta nwere ike mmenyenjo ndị ụfọdụ.
PhotoRec bụ nchebe iji, ọ ga-agbali ide na mbanye ma ọ bụ na ebe nchekwa nkwado ị bụ banyere iji naghachi n'aka. Natara faịlụ na-kama dere na ndekọ na si ebe ị na-agba ọsọ na-PhotoRec usoro. Naghachi faịlụ site na diski ike, USB isi, Smart Kaadị, CD-ROM, DVD, wdg, i kwesịrị ezuru ikike iji nweta anụ ahụ ngwaọrụ.
Uru: Ọ bụghị nanị na-eweghachi. Ọzọkwa ehicha. Ekpochapụ ihe niile na a ụfọdụ mbanye ke 1 eze ume. -Arụ ọrụ na abụba nakwa dị ka NTFS. Cons: Little bit nke iju interface (na 'Others'-button n'ihi na' Hichapụ Zuru 'na kpamkpam dị iche iche bọtịnụ maka' Weghachi site Iṅomi '). Dị ka ọ bụrụ nhichapụ / wiping e chọrọ maka. Ọ dịghị enyemaka n'oge niile.
Mweghachi bụ obere ma dị mfe obere ịba uru na-enye ohere ọ bụ onye ọrụ iji weghachi ma ọ bụ naghachi faịlụ na e wepụrụ Windows ma ọ bụ ehichapụ si egweri biini. Mweghachi nwekwara ike-eji na-agbake furu efu foto na ndị ọzọ na misc faịlụ site na obere media dị ka USB flash draịva, ike draịva na kọmpat flash kaadị a na-eji ọtụtụ igwefoto dijitalụ si.
Download ya ebe a: http://www3.telus.net/mikebike/Restoration.zip
Uru: mfe iji na enyi na enyi interfaces. Nchekwa na-eji, na-agụ-naanị. Preview tupu mgbake. Àjà a ikpe mbipute maka scanning na data atule. Cons: Ị mkpa iji kwụọ ụgwọ maka ya mgbe agbake faịlụ.
Wondershare Data Recovery Nwere ma Windows na Mac nsụgharị, nke-enye gị ohere naghachi faịlụ ruo 550+ formats. Ọ na-arụ ọrụ n'ihi na nza nke ngwaọrụ, dị ka kọmputa, Laptọọpụ, mpụga ike draịva, USB draịva, ese foto, MP3 / MP4 Player, na otú pụta. Abụọ mgbake ụdịdị bụ bukwanu maka kọmputa beginners na lagoro ezumike nka.
Download ikpe mbipute n'okpuru maka free.
Ị nwere ike na-ekiri ndị video nkuzi nke na-agbake USB faịlụ site na iji Wondershare Data Recovery n'okpuru.
Olee otú Unformat NTFS Drive
Olee otú naghachi faịlụ site USB Flash mbanye ke Mac
Top 10 Secure Flash Drive n'ihi na gị data nche
Olee otú Mmepụta oyiri A USB Drive ka ọzọ
Raw USB Drive Data Recovery: Olee naghachi Data si Raw USB Drive
Olee otú Naghachi Data si HP Flash draịva
Olee otú naghachi faịlụ site formatted Flash Drive